Lalàm-pifidianana : eo hatrany ny tsy fahatokisana ny fanjakana | NewsMada
Lalàm-pifidianana : eo hatrany ny tsy fahatokisana ny fanjakana
Mbola tsy milamina ny amin’ny fandrafetana ny volavolan-dalàm-pifidianana. Eo hatrany ny tsy fahatokisana ny fanjakana…
“Misy miteny hoe mila hita ny rijan-teny, sao misy fandripandrika ataon’ny fitondram-panjakana: o ry zalahy, mba efa ampy izay ny fiarahana. Efa napetraka ny foto-kevi-dehibe, nisy ny adihevitra nafana, noraisina avokoa… “
Io ny nambaran’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana O. teny Anosy, ny faran’ny herinandro teo, manoloana ny fangatahan’ny mpanao politika sy ny firaisamonina sivily ny famoahana ny volavolan-dalàm-pifidianana, izay iandrasana ny asan’ny komity iraisan’ny minisitera.
“Miangavy anareo mpanao politika sy ny firaisamonina sivily, raha tsy afa-po amin’izay zavatra mety havoakan’ny filankevitry ny minisitra isika: mbola misy ny Antenimiera roa, ataovy izay hitondrana ny hevitrareo amin’izy ireo”, hoy izy.
Tsy maintsy tratrarina ny fanatanterahana fifidianana
Tsy maintsy mandeha araka ny tokony ho izy isika mba hahatrarana ny lamim-potoana hahatongavana amin’ny fifidianana, araka ny fanazavany. Efa henony ny hetahetan’ny Ceni na ny vahoaka malagasy hahafantatra ny datim-pifidianana.
Taorian’ny fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny asan’ny komity iraisan’ny minisitera tamin’ireo tomponandraikitra politika, firaisamonina sivily, olon-tsotra: efa vita tanteraka ny rijan-teny momba ny lalàna mifehy ny fifidianana.
Eo hatrany ny tsy fifampitokisana
Tena mandeha amin’izay fanatrarana ny fifidianana ara-potoana izay ve ny mpitondra? Nefa niniana tsy natao, ohatra, ny fifidianana filoham-paritra sy filoham-paritany, narirarira lava teny noho ny paipaika sy kajikajy politika. Toy ny nanaovana ny lalàna mifehy ny serasera… mamono fahafahana, novaina fa tsy araka ny fakan-kevitra. Izay koa no tsy atokisan’ny olona ny fanjakana amin’ny lalàna mifehy ny fifidianana.
Manao izay fomba rehetra handresena amin’ny fifidianana ny mpitondra, efa mahalala fa tsy ankasitrahan’ny vahoaka intsony noho ny tsy fahombiazana? Izy aza tsy matoky tena matoa tonga amina karazana paipaika sy kajikajy politika rehetra izao. Ahoana no ahatokisana azy? Politika no atao…